Shantii mid kamid ah baraakooyinka xanaanada caruurta waa in la burburiyaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shantii mid kamid ah baraakooyinka xanaanada caruurta waa in la burburiyaa
La daabacay tisdag 11 juni 2013 kl 10.38
Waxaa hada meelo badan oo dalka kamid ah ka bilowdey rarista xanaanada caruurta kadib markii sharci cusub uu ku qasbay in la burburiyo aqalada kumeelgaarka ahaa ee ay ku yaaleen, sida uu wariyey telefishinka SVT.
Mararka qaar ayaa degmooyinka ku qasbanaadaan in ay caruurta u bedelaan xaruumo kale oo kumeelgaar ah madaama sida loo fasiro sharcigaan uu degmooyinka ku noqdey lama filaan. Sannadyada soo socda ayaa dhibataada arintaan waxaa wajahi doona degmooyinka faro badan oo dalka ku yaala sida uu wariyey SVT Nyheter.
Toban kamid ah 15 degmo ee ugu waaweyn dalkaan Iswedhen waxay dhorkii sanno ee ugu danbeeyey si weyn u maagelinayeen dhisida aqalada baraakada ah maadaama dhisidoo ay ka howl fududahay dhismayaasha kale. Sadex meelood aqaladaan baraakada ka sameysan ayaa waxaa la dhisey horaantii sannadyadii 2000.
Laakiin waxeysan degmooyin badan sugeynin in uu soo baxi doono sharci xadidaya dhismayaasha kumeelgaarka ah oggalaanshahooda dhismo kana dhigi doona 10 sanno kaliya. Waagii hore ayaa dhismoyaal badan oo kumeelgaar ahaa la siin jirey cafis in loo dheereeyo oggolaanshaha dhismada, taas oo loogu dari jirey hal ama labo sanno oggalaanshaha. Laakiin sharciga cusub ayaa arintaas meesha ka saarey.